Mid kamid ah Askarta Canshuuraha Puntland oo lagu dilay Boosaaso & Goobo Ganacsi oo Argagixisadu u hanjabeen.
BOOSAASO(P-TImES) – Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dil magaalada Boosaaso loogu geystay goor dhaw sarkaal katirsanaa laamaha Canshuuraha berriga ee magaaladaas, kaas oo ay dileen dabley hubeysan, kana baxsaday goobta ay dilkan ka geysteen sida ay sheegayaan laamaha Ammaanka.
Allaha unaxariistee Faarax Maxamed oo loo yaqaan Caynab ayaa kamid ahaa saraakiisha Canshuuraha Bariga ee Magaalada Boosaaso, waxaana uu kusugnaa marka la dilayay agagaarka Meherad lagu magacaabo Yamayska oo ka fogeyn Xalwo KIsmaayo, qeybteda kutaala halka laga soo galo gudaha magaalada Boosaaso.
Ciidamada Amniga oo goobta gaaray ayaa sameeyey baaritaan, waxay soo qabteen dad laga shakisan yahay, balse ma jiran cid ilaa hadda la xaqiijiyey in lagu qabtay falkan.
Sidaas oo kale, habeen kahor xarumaha mid kamid ah shirkadaha Ganacsi ee kuyaala magaalada Boosaaso ayaa lagu buufiyey amar sheegaya in aan cidna furi karin, taas oo kaliftay in ay cabsi badan dareemaan shaqaalaha Xaruntan oo ka welwelsan bad-qabkooda.
Warar hoose oo ay heshay PuntlandTimes ayaa sheegaya in kooxaha Argagixisada ah ee Daacish iyo Al- Shabaab ay doonayana dhaqaale badan oo ay ka helaan shirkadaha ganacsiga ee Puntland, laakiin ay taasi diideen ganacsatada qaarkood.
Shirkaddan la amray in la xiro ayaa diiday bixinta dhaqaalahaas fara badan ee lagu soo rogay, waxaana xubno katirsan Shirkaddan ay u sheegeen PuntlandTimes in dhaqaalahaas aysan aqoonin cida ka doonaysa iyo waxay ku bixinayaan toona.
Madaxweynaha Puntland ayaa marar badan sheegay in ay wax ka qabanayaan ficilada Argagixiso ee Boosaaso, haddana ilaa hadda majirto wax talaabo ah oo lagu soo qabtay dadkii ka dambeeyey dilalkii u dambeeyey ee dhacay, inkastoo habeen hore ay ciidamadu qabteen mid kamid ah ragga sida weyn loo doon-doonayey ee kooxahan Argagixiso.
Meeshan waxaa toos uga muuqda fashil hoggaamineed oo Siciid Deni iyo hortii Cabdi Weli Gaas ay ku curyaamiyeen kalsoonidii shacabka deegaanada Puntland ka dib markii ay si xun u gabeen in ay Puntland ka hirgaliyaan ismaamul hoosaad dhab ah ee heerka gobol, heerka degmo iyo heerka tuulo. Wa hadal nacaseed aad loogu qoslo “shabaab” iyo “dacish” ayaa Puntland iyo Soomaaliya ba ka jira oo dharaar cad magaalooyinka gudahooda canshuur dadka kaga guranaya. Duulkani cirka kama soo dhacaan oo ciidda kama soo dhex dusaan ee war kale miyaa la hayaa?
Waa dadka deegaanka oo siyaabo kala geddisan u gadoodsan oo qori caaraddii is miciin baday. Xalka Puntland u yaallaa ma aha in dadkan wada dhashay la isku jabiyo ee waxaa weeye in shacabka ahlu deegaan kasta ismaamulkooda hoose lagu ammaan galiyo oo dowlad wanaagga inta lagu tababbaro deeto lagu taakuleeyo. Dowladi shacab weeye oo shacabka haddii aan kalsooni buuxda laga kasbanin burbur daakhil ah ayaa nadaamka dowliga ee dagal mise dal kasta ku habsada.
Hoggaanka Puntland straatijiyad hoggaamineed oo saxsan oo leh himilo loo wada hanweyn yahay haddii aanay hindisaheeda la imanin tabtaasay u ahaan doontaa. Dowladi kalsooni laga qabo ayay dowlad ku tahay, haddii kale way dhabaqdaa oo aakhirka la isku ceeboobaa.
Sida aan hubo waxaa weeye in haddii degmo kasta hoggaan dhaqameedkeeda ay culimo ku jirto iyo shaqaale dowladeed oo u dhashay dowladda hoose lagu aamino ay xukuumadda Puntland u sahlanaan lahayd in shacabka ahlu deegaan kasta ay canshuurahooda si daacad ah u dhiibaan oo maamulka guud loo guddoonsiiyo maadaama ay waddaniyad iyo kalsooni buuxda dareemayaan. Dowlad Wanaaggu waa kan min dabaqadda ugu hooseysa ilaa dabaqadda ugu korreysa ku shaqeeya (bottom-up) ee ma aha kan dabaqadda ugu korreysa ilaa tan hooseysa wax lagu muquuniyo (top-down) ee Puntland iyo Soomaaliya ba dhabaqa xun iyo ragaadka ku keenay.